နှစ်ပေါင်း ၁,၅၀၀ ရှိသမ္မာကျမ်းစာကယေရှုကိုကားတိုင် တင်၍ မရဟုပြောကြားခဲ့သည်။ AFRIKHEPRI
အဟောင်းကမျြးစာကို 1500 နှစ်ပေါင်းယရှေုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေမဟုတ်သည်ဟုဆို
Whitney - ကျွန်ုပ်ဖြစ်ခွင့် - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၈)
တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 12, 2020
Log in ဝင်ပါ
Aဗာတီကန်ကိုအကြီးအကျယ်မနှစ်သက်သည့်အတွက်တူရကီ၊ အန်ကာနာရှိရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်တွင်နှစ်ပေါင်း ၁,၅၀၀ မှ ၂,၀၀၀ အထိသမ္မာကျမ်းစာကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားသောထိုစာအုပ်တွင်ခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ်သောဗာနဗခရစ်ဝင်ကျမ်းပါ ၀ င်သည်။ သူသည်ယေရှုအားကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းမခံရကြောင်း၊ သူသည်ဘုရားသခင့်သားမဟုတ်ဘဲပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုစာအုပ်ကတမန်တော်ပေါလုအား“ အတ္တသမား” ဟုခေါ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူကြောင်းနှင့်ယုဒရှကာရုတ်သည်သူ၏နေရာတွင်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရကြောင်းကိုလည်းထိုစာအုပ်ကဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါအားဖြင့်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ အမျိုးသားရေး Turk ကျမ်းစာကမြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအတွင်းမှာလူကုန်ကူးဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းအားဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာသည်ဂိုဏ်းမှောင်ခိုရှေးဟောင်းတရားမဝင်တူးဖော်နှင့်ပေါက်ကွဲအပိုင်စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါစာအုပ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ (40 သန်းတွေအကြောင်း။ ဒေါ်လာ) ထက်ပိုမို 28 သန်းတူရကီလိုင်ရာမှာတန်ဖိုးထားကြသည်။ သင်ကလိုအပ်သည့်အခါသူခိုးအစည်းအရုံး, အဘယ်မှာရှိသနည်း
အစီရင်ခံစာများအရ, ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဘာသာရေးအာဏာပိုင်များ Tehram စာအုပ်မူရင်းကြောင်းအပြင်းအထန်တောင်းဆို။ အဆိုပါစာအုပ်ကိုယ်တိုင်ကထိထိရောက်ရောက်မ Neo-Aramaic, ယရှေုခရစျ၏ဘာသာစကားမှာခညျြနှောငျရွှေအက္ခရာများ, သားရေနှင့်အတူရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ စာသားဓမ္မသစ်ကျမ်းခရစ်ယာန်ဘာသာ၏သွန်သင်ဆန့်ကျင်ရာအစ္စလာမ်ဘာသာမှတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူရူပါရုံကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ယေရှုသည်လည်းအနှစ်အကြာတွင်အစ္စလာမ်ဘာသာ 700 တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူတမန်တော်မြတ်မိုဟာမက်၏ကြွလာကြိုမြင်။
ဒါဟာနိုငျစီယာကောငျစီအတှငျးကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသောသမ်မာကမျြးတက်စေသောခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မှရွေးချယ်တော်မူပြီဟုယုံကြည်လျက်ရှိ၏ မဿဲ, မာကု, လုကာနှင့်ယောဟန်၏လေး canonical ခရစ်ဝင်ကျမ်းအဘို့ (အခြားသောသူများကြားတွင်) ဗာနဗ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုချန်လှပ်။ အတော်များများကသမ္မာကျမ်းစာကျမ်းပင်လယ်သေနှင့်နောစခရစ်ဝင်ကျမ်းအပါအဝင်, အချိန်ကျော်ပေါ်လာဖို့စတင်ကြပြီ ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ဤစာအုပ်ကို, ဗာတီကန်စိတ်မပူပါနဲ့ပုံရသည်။
ယေရှုခရစ်သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေမခံခဲ့ရသည့်အပြင်သူသည်သေခြင်းကိုမသိဘဲ into လိကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်Bernabéခရစ်ဝင်ကျမ်းမှအပေါခရစ်ဖာကျမ်းများ၏ကျမ်းပိုဒ်ကိုအတည်ပြုသည်။
ထို့နောက်ယေရှုက“ ငါသည်မိုbefore်းကောင်းကင်ရှေ့၌ကြွေးကြော်ပြီးလျှင်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့၏အသံကိုငါကြား၏။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး မှမွေးဖွားလာသောဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ချက်ကိုခံယူပြီး၊ အခြားယောက်ျားများနှင့်အတူ နေ၍၊
အခန်း ၉၇ းသခင်ယေရှုသည်သူသည်မေရှိယဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီး၊
ထို့နောက်ပုပ်ရဟန်းမင်းက“ မေရှိယကိုအဘယ်သို့ခေါ်ဝေါ်ကြမည်နည်း။ အဘယ်လက္ခဏာသက်သေရှိသနည်းဟုမေး၏။ သခင်ယေရှုက“ မေရှိယ၏နာမတော်သည်မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းသည်။ အကြောင်းမှာသခင်ယေရှုသည်မိမိ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆင်း။ ကောင်းကင်ဘုန်းအသရေ၌နေရာချတော်မူသောအချိန်၌ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သူ့ကိုပေးအပ်ခဲ့သောကြောင့်တည်း။ သူက "မိုဟာမက်ကိုစောင့်ပါ။ မင်းကိုချစ်တဲ့အတွက်ငါပရဒိသု၊ ကမ္ဘာနဲ့မင်းကိုငါမိတ်ဆက်ပေးမယ့်သတ္တဝါမြောက်မြားစွာကိုဖန်တီးချင်တယ်။ သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိ၏။ သင့်ကိုကျိန်ဆဲသောသူသည်ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ သင့်ကိုဤလောကသို့ငါစေလွှတ်သောအခါ၊ ကိုယ်တော်၏စကားတော်သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ကွယ်ပျောက်လိမ့်မည်။ မိုဟာမက်သည်သူ၏ကောင်းမြတ်သောနာမတော်ဖြစ်သည်။ လူများတို့က၊
အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏တမန်ကိုစေလွှတ်တော်မူပါ။ အို - မုဟမ္မဒ်၊ ကမ္ဘာ၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အလျင်အမြန်လာလော့။
အခန်း ၂၁၅ နှင့် ၂၁၆ - Jesus ၀ ံဂေလိတရားတွင်ယေရှုကို“ ချီဆောင်” ပြီးယုဒနှင့်အစားထိုးခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်
စစ်သူရဲများနှင့်ယုဒလူတို့သည်ယေရှုနေရာအရပ်သို့ရောက်တော်မူသောအခါ၊ သူသည်ကြောက်။ အိမ်ထဲသို့ဝင်သဖြင့်၊ တကျိပ်တပါးသောအိပ်ပျော်နေသောခဲ့ကြသည်။ သူ့ကျွန်၏ခရီးကိုဘုရားသခင်မြင်သောအခါ၊ သူ၏ကျွန်များဖြစ်သောဂါဗြေလ၊ မိက္ခေလ၊ ရာဖေးနှင့်ဥရေလတို့ကိုသခင်ယေရှုကိုဤလောကမှထုတ်ဆောင်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်များတို့သည် လာ. ယရှေုကို ယူ. တောင်ဘက်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြတင်းပေါက်အထဲက။ သူတို့ကသူ့ကိုသယ်ဆောင်နှင့်ကောင်းကင်တမန်များနှင့်အတူတတိယကောင်းကင်သို့သူ့ကို ထား. , အစဉ်အမြဲဘုရားသခင်အားချီးမွမ်း။
ယုဒသည်သခင်ယေရှုခေါ်ဆောင်သွားရာနှင့်တစ်ဆယ့်တစ်နှစ်အိပ်ခဲ့သည့်အခန်းသို့ ဦး ဆုံး ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမြတ်နိုးဖွယ်ဘုရားသခင်သည်အံ့ acts ဖွယ်ပြုမူသည်။ ယုဒသည်သူ၏ဘာသာစကားနှင့်မျက်နှာတော်တွင်သခင်ယေရှုနှင့်အလွန်ဆင်တူသဖြင့်သူသည်ယေရှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့သည်။
အခနျးကွီး ၂၂၀– သခင်ယေရှုသည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်သူမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်
ယေရှုက“ ဗာနဗ၊ သင်သည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောမေးခွန်းများကိုမေးပါမည်။ ထို့နောက်စာရေးသူကဤသို့ဆိုသည် -“ သခင်၊ ဘုရားသခင်ကရုဏာရှိတဲ့အတွက်မင်းသေပြီလို့ယုံကြည်အောင်ငါတို့ကိုဘာကြောင့်ညှဉ်းဆဲတာလဲ။ မင်းအမေကမင်းကိုအရမ်းငိုလွန်းလို့သူမသေလုနီးပြီ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းတော်မူခြင်း၊ ကရာနီတောင်ပေါ်တွင်သူခိုးများအလယ်တွင်အသတ်ခံရခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ခံတော်မူသနည်း။
ယေရှုဒီလိုပြောခဲ့တယ် -“ ဗာနဗ၊ ငါ့စကားကိုယုံလော့။ ဘုရားသခင်သည်သေးငယ်သောအပြစ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်သည်အလွန်နာကျင်စေတော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိခင်၊ သစ္စာရှိသူနှင့်တပည့်တော်များကကျွန်ုပ်ကိုမြေကြီးပေါ်၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာအနည်းငယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးသကဲ့သို့ဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်သောဘုရားသည်ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငရဲ၏မီးတောက်ထဲတွင်အပြစ်မပေးနိုင်စေရန်အပြစ်ပေးချင်ခဲ့သည်။
ငါမူကားဤလောက၌အပြစ်မရှိသောသူဖြစ်သော်လည်း၊ လူတို့သည်ငါ့ကိုဘုရားသခင်နှင့်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်သည့်အတိုင်း၊ တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌နတ်ဆိုးများကိုငါမထီမဲ့မြင်မပြုစေခြင်းငှါ၊ ယုဒသေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံသည်ဟုကျွန်ုပ်အားလူတိုင်းယုံကြည်စေခြင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာကြီး။ ဤလှောင်ပြောင်သရော်မှုသည်ဘုရားသခင့် Messenger Muhammad၊ ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏တရားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊
ထိုအခါသခင်ယေရှုက“ အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏။
SOURCE မှ: Bernabé၏ospelဝံဂေလိတရားကိုဖတ်ပါ http://www.aimer-jesus.com/evangile_barnabe_texte.php
၁၅၇ နှင့်သူတို့၏စကားကြောင့်“ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သောမာရိ၏သားယေရှု၊ ငါတို့သခင်ယေရှုကိုအမှန်ပင်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီ” …။ သူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုမသတ်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာမသတ်ကြ။ ဒါပေမယ့်သာဟန်ဆောင်ခဲ့သည်! သူ၏အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးကြသူများသည်မသေချာမရေရာမှုအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်။ သူတို့သည်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ မသိသောမသိမှု၊ မှန်းဆချက်အတိုင်းသာ လိုက်၍ သူ့ကိုမသတ်ခဲ့ကြပါ။
159. ကျမ်းဂန်တွင်သူမသေဆုံးခင်ကသူ့ကိုမယုံကြည်သောသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမရှိပါ။ ထို့အပြင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနေ့တွင်သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့သက်သေဖြစ်လိမ့်မည်။ S-AN-NISA '(မိန်းမ)
ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်၎င်းတို့၏ထောက်ခံသူများထံမှဆင်းသက်လာသည့်ဘာသာတရားများအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်အဘယ်သို့နည်း, အဲဒီအစားတင်းကျပ်စွာပွဲချင်းပြီးကြိုက်တယ်။ ဗာတီကန်အသင်းတော်အတွင်းစာအုပ်အကြောင်းအရာဆနျးစစျဖို့တူရကီအာဏာပိုင်များကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ယခုစာအုပ်တွင်တွေ့သောသူတို့သညျမိမိသက်သေအထောက်အထားများကိုလက်ခံရန်လာကြလိမ့်မည်နည်း သူတို့ကဒီကိုငြင်းပယ်ကြလိမ့်မည်နည်း
ယုံကြည်သူများမကြာမီသူတို့၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုအရာဝတ္ထုမတရားကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်; အပေါငျးတို့စာသား, အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးကျမ်း, အနက်ကိုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခကျြမြားကိုတကယ်မူရင်းကြောင့်?
သမ္မာကျမ်းစာသည် ၃၂၅ တွင်နီကာကောင်စီ၌Emကရာဇ်ကွန်စတင်တိုင်းကဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်စာသားများစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ လပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဘိရှော့များသည်ဘာသာရေးနှင့်ဆက်နွယ်မှု၏သဘောသဘာဝကိုဆုံးဖြတ်သည့်စာသားကိုသဘောမတူနိုင်ခဲ့ပါ။ ခမည်းတော်ထံခရစ်တော်သည်theကရာဇ်သည်ပြန်လည်အသိအမှတ်ပြုသူ ၁၄ ကိုခြိမ်းခြောက်သည်။ သုံးခုသည် Arius အပါအ ၀ င်သူတို့၏အယူအဆများကိုဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
“ ထင်ရှားသော” ဘာသာတရားသုံးခု၏ဘုံမူလအစ
မောရှေ (Hebrew משהבןעמרם Moshe ben Amram, ဂရိMωϋσῆς or Μωσῆς, Mō (y) sēs, Latin Moyses, Arabic موسى Moussa) သည်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် "mosaic" ဟုခေါ်ကြသောယုဒဘာသာရေး၏ပထမဆုံးပရောဖက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ "မောရှေ၏ဘာသာတရား" ကိုဆိုလိုသည်။ ဂျူးဘာသာဝင်များအတွက်ပညတ်တရားကိုလက်ခံခြင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာအတွက်ယေရှုခရစ်ကိုပုံဆောင်ခြင်းနှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာအတွက်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်လက်ထက်ကမောရှေသည်ဟေဗြဲကျမ်းစာတွင်အရေးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
Freud ကိုလည်းအလွန်အမည် "မောရှေအား" အီဂျစ်မူရင်းခဲ့ကြောင်းနိဂုံးသို့ရောက်ကြ၏။
မောရှေသည်ဟေဗြဲဘာသာဖြင့်မော်ဆဖြစ်ပြီးအီဂျစ် onomastics မှAhmosès, Toutmosès, Ramses …ကဲ့သို့သောဖာရောဘုရင်တို့၏အမည်များဖြင့်လူသိများသောဒြပ်စင်တစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ယင်းကိုအချိန်အတန်ကြာတပ်ဆင်ထားသည့်“ အာရှ” Semites တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အရှေ့ပိုင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင်, အဲဂုတ္တုပြည်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းအတွက်ထပ်တလဲလဲဖြစ်ရပ်ဆန်း "5 ။
ထို့ကြောင့် Moshe သည်“ မွေးဖွားရန်” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသောအီဂျစ်အမြစ် mesi / mas / mes ၏ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ "Mosèမှ (မောရှေ = ကလေး၊ mésy = မွေးဖွားခြင်းစသဖြင့်) မှမောရှေ၏အမည်သည်အီဂျစ်နာမည်နှင့်သွေဖည်သည်။ ပထမအပိုင်းကိုဘုရားသခင့်နာမတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် - Thotmès, Ramès7စသည်တို့ဖြစ်သည်။ " မောရှေသည်ဤပေါင်းစပ်ထားသောသီအိုရီ၏ဒုတိယအပိုင်းကိုသာသိမ်းထားခဲ့သည်။
Freud ထို့နောက်ဂျူးခေါင်းဆောင်၏နာမတော်ကိုဟီဘရူးမူရင်းမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်အီဂျစ်စကားလုံး MOS မှ လာ. တရားဝင်လူတစ်ဦးအဓိပ်ပာယျကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
1937 ခုနှစ်, Imago က Akhenaten မိမိတိုင်းပြည်အပေါ်စည်းကြပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ဖူးကြောင်းသစ်ကိုဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးပညာရေးအကြားခိုင်မာသောတူညီမှုရှိကွောငျးကိုသရုပ်ပြရှိရာမောရှသေညျအီဂစျြခဲ့ပါလျှင်ခေါင်းစဉ် Freud အားဖြင့်အခြားဆောင်းပါး, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ တဖန်မောရှေအားစွပ်စွဲ။ ထိုအဇီးဂမွန် Freud ကိုးကား: "ဂျူးအယူဝါဒပြောတတ်: 'ရှေ Yisrael ကြလော့ကြလော့ Elohenu Echod ။ "( 'နားထောင်အိုဣသရေလအမျိုး,! ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောငါတို့၏ဘုရားသခင်တဦးတည်းမိနျ့တျောမူ၏') သူ့ကိုအဆိုအရ, ဟီဘရူးအက္ခရာအဖြစ်" ဃဏ t ကို "နှင့်ရအက္ခရာ" "(အ Dalet) သည်အီဂျစ်စာတစ်စောင်နှင့်အတူပမာဏမှာတူညီသည်" "နှင့်" ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိုဣသရေလအမျိုး, နားထောင်လော့e", အဲဒီနှစျခုရှေးဘာသာစကားများအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်, ဒီထားသောစာပိုဒ်တိုများအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်" ဘုရားသခငျသညျဘုရားသခငျသာ Aten ဖြစ်ပါသည် "။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသို့သော်, Akhenaten qu'Aten ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ရပါမည်သူမှသာဘုရားသခင့ခဲ့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဟီဘရူးအတွက်ကြလော့ "ငါ၏သခင်" ကိုဆိုလိုတယ်။ နောက်ဆုံးစာနှစ်စောင်ကဤစကားလုံးများ၏ "ai" "ငါ့အ" သို့မဟုတ် "မိုင်း" အဓိပ္ပာယ်ထို့ကြောင့်အပိုင် evoking ဟေဗြဲနာမ်စားဖြစ်ပါတယ်။ ဇီးဂမွန် Freud မှန်ကန်စွာနှုတ်ကပတ်တော်ကို "Adon" (သခင်ဘုရား) ကိုအီဂျစ်စကားလုံး "Aten" ၏ဟီးဘရူးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ပြ အမှန်မှာထို "t" အီဂျစ်အဖြစ်ဟီဘရူးရှိ "ဃ" ဖြစ်လာသည်နှင့် "e", 'o' Adon အီဂျစ် Aten ၏ဟီးဘရူးညီမျှသည်ဖြစ်လာသည်။
ထို့ကြောင့် Adon နှင့် Aten တဦးတည်းနှင့် (ဘုရားသခ) ကိုအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။
အောက်ကနှစ်ခုကျမ်းပိုဒ်များ၏နှိုင်းယှဉ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Akhenaton မှစွပ်စွဲသော Aten မှမဟာဓမ်မတေး, ဆာလံ 104 တစ်မြင်သာထင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ပါသည်:
"တိုင်းနွားကသူ့မြက်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်၏ သစ်ပင်များနှင့်မြက်အစိမ်းရောင်ဖြစ်လာ; သူတို့ရဲ့အသိုက်ထဲကနေပျံသန်းသောငှက်, သူတို့ရဲ့အတောင်ပံသင့်ရဲ့ဖြစ်လျက်ရှိကိုးကွယ်နေကြသည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များကသူတို့ခြေထောက်ပေါ်ခုန်စတင်ပါ။ ထိုအပျံသန်းသောသူတို့အားနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အထသောအခါတိုက်ရိုက်ပေါ်ထွန်းသောသူတို့။ အဆိုပါလှေတက်နဲ့စီးဆင်းသွားပါ။ သငျသညျထငျရှားလေဘာလို့လဲဆိုတော့မဆိုလမ်းကြောင်းဖွင့်လှစ်သည်။ သင့်ရဲ့ရောင်ခြည်သမုဒ္ဒရာ၏ရငျခှငျမှထိုးဖောက်သောကြောင့်, သင်၏မျက်နှာကိုမှခညျြနှောငျမြစ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာငါး, အလွန်အစိမ်းရောင်။ "(ဖာကိုအဲဂုတ္တုယဉ်ကျေးမှု Arthaud, 1965, p ၏François Daumas ။ 322-323 ။ )
"သူကမြက်တိရစ္ဆာန်များအဘို့ကြီးထွား, လူ့လိုအပ်ချက်များအတွက်ပျိုးပင်, ထိုပြည်ကိုအသီးအနှံအစားအစာ, လူသား၏နှလုံး gladdens သောစပျစ်ရည်ကိုကြောင်းအမိန့်ကို, ဆီထွန်းလင်းထက်ပိုမ သူ၏မျက်နှာနှင့်လူ၏နှလုံးထောက်ကြောင်းမုန့်။ သစ်ပင်များကိုမိနျ့တျောမူ၏သူစိုက်သောအကြောင်း, လေဗနုန်အာရဇ်ပင်တို့ကိုရေလောင်းကြသည်။ ငှက်တို့သည်၎င်းတို့၏အသိုက်လုပ်ရှိရာဤသည်ကား, တောငန်းအကြီးအငယ်နှစ်ဦးစလုံး, သောအမှုအရာမရေမတွက်နိုင်သောတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏မြင့်သောတောင်ထိပ်တောဆိတ်အဘို့ဖြစ်ကြ၏ထင်းရူးပင်အတွက်အိမ်, နှင့် conies များအတွက်ကျောက်ဆောင် [ ... ] ဒီအကြီးအကျယ်ပြန့်ပင်လယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ်; သင်္ဘော [ ... ] ရှိပါတယ်သွားပါ။ "
ထို့ကြောင့်အီဂျစ်လူမျိုး Akhenaten သည် monotheism အစွန်းရောက်၏ပရောဖက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့်အထူးသဖြင့်ဆာလံ ၁၀၄ တွင်အနည်းငယ်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသည့် Aton သို့ဓမ္မသီချင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
Akhenaton ၏အချိန်, ဘာသာရေးအဆင့်ဆင့်ရဲ့ထိပ်မှာနှစ်ခုရာထူးဂုဏ်ရှိန်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်:
Merire II ကိုAmarna ဗိမာနျမှာ Aten ၏, ယဇ်ပုရောဟိတ်။
PanehesyAkhenaten ၏ Aten ဗိမာနျတျော၏ကျေးကျွန်များ၏ဦးစီးချုပ်။
မေရာရိဘယ်လေဝိအမျိုးသားတစ်ဦးအဖြစ်ကမ္ဘာဦး 46.11 အတွက်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်, နာမတော်ရှိ Merire.
ဖိနဟတ်အဆိုပါဧလာဇာ၏သားနဲ့ 6.25 အဆိုအရအာရုန်ကိုထှကျမွောကျရာ၏မြေးဖြစ်သူသားသူကားအဘယ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Talmud ခုနှစ်တွင်သူ၏နာမ Pinhas ဖြစ်ပါတယ်။ နာညီမျှအီဂျစ်ဖြစ်ပါသည် Panhesy.
ထို့ကြောင့်ဤအ Amarna မှာ Akhenaton တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့သိနာအတွက်သူ့ကိုလိုက်ပါသွားသူတူညီတဲ့ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံပေါ်ပါတယ်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မောရှေနှင့် Akhenaton တဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်လူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလာပါတယ်။
Akhenaton သေဆုံးခြင်းသည်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။ အမှန်စင်စစ်သူသည်မဟာမိတ်များဖြစ်သောသေတ္တာတော်ကိုခိုးယူခြင်းဖြင့်အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြေးခဲ့သည်။
- Adon ပထမဦးဆုံးအမည်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဘုရားသခင်တဆူတည်း ကျမ်းစာထဲမှာ။
- အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု ၏အမည်ဖြစ်ပါသည် ဘုရားသခင်တဆူတည်း ဖါရောဘုရငျ Akh-my-Aten ။
- အာဒံကို အဆိုပါဖြစ်ပါသည် 1er လူကို ကမျြးစာ၏။
- Akh-In-အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု အဆိုပါဖြစ်ပါသည် 1er လူကို ယင်းအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ။
- ကြလော့ ၏အမည်ဖြစ်ပါသည် Dieu က de L 'အစုလိုက်အပြုံလိုက်.
- အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု-အာဣမြို့ အဆိုပါဖာရောဘုရင်၏နာမတော်သည် /Dieu Akh-my-Aten ၏ဆက်ခံသူ ပြည်ပရောက် အဆုံးစွန်သော (Akh-and-Aten) ၏မြို့တော်၏လူဦးရေ။
- ကြလော့ "ခဲ့ခမည်းတော်ဘုရား"။
- အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု-အာဣမြို့ (ဖါရောဘုရငျကိုဆက်ခံ Akh-my-Aten) "အားကြားပြောလေ၏ဘုရားသခငျ့အဖေ"(ခမည်းတော်ဘုရား), သူ Akh-my-Aten ၏ဘထွေးခဲ့လို့ပဲ။
- အ ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ဥယျာဉ်တော် အဆိုပါဖြစ်ပါသည် ပရဒိသုဆုံးရှုံးခဲ့ရ.
- အ ထိုဥယျာဉ်ကိုအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု (Akh-and-အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု) သည်မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ပရဒိသုဆုံးရှုံးခဲ့ရ Aten ၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု။
- လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ခဲ့သည် ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကနေပြည်ပရောက် တန်းတူ ခမညျးတျောသညျဘုရားသခငျကြလော့.
- Aten ၏လူကိုးကှယျခဲ့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၏ဥယျာဉ်ထဲကနေပြည်ပရောက် တန်းတူ le "ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘ" အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု-အာဣမြို့.
- မောရှေသည် ရန်ပြောဆိုထားသည် မောရှေသည်.
- RaMSES ra ကဆိုပါတယ်ခဲ့သည်မောရှေသည်.
- တဖန်မောရှေအား (မောရှေသည်) နည်းလမ် "မွေးဖွား"(" ရေမှေးဖှား "မြစ်မှလာ)
- MSES (မောရှေသည်) နည်းလမ် "မွေးဖွား"(" Ra-MSES ၏ဖြစ်ရပ်မှာ "Ra ၏မွေးဖွားခဲ့ပြီး) ။
- အာရုန်သည် ခဲ့ မောရှေ၏အစ်ကို (မောရှေသည်) ။
- ဟောရ-Em-Heb ခဲ့သည် လက်နက် Ra-MSES အတွက်အစ်ကို (Ra-မောရှေသည်), နှင့်ဖြစ်ကောင်းသည်သူ၏ဇီဝအစ်ကို။
- အာရုန်သည် "တောငျပျေါကွယ်လွန်သွားဟောရ ha-har ။ "
- ဟောရ-Em-Heb နည်းလမ်းများ "ဟောရကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ "
- အာရုန်သည် အဆိုပါခဲ့သည် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မောရှေသည်။
- ဟောရ-Em-Heb ခဲ့သည် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် (သံအမတ်ကြီး) သည်ဖါရောဘုရင် (အားလုံး-Ankh-မုန်နှင့်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု-အာဣမြို့) ။
- အာရုန်သည် était ယဇ်ပုရောဟိတ် ဂျူးဘာသာ၏။
- ဟောရ-Em-Heb ခဲ့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ် (ဖါရောမင်းသည်ကဲ့သို့) Horus နှင့်မုန်။
- အာရုန်သည် était ထူးထူးအပြားပြား အခမ်းအနားဟာယပူဇော်သက္ကာ။
- ဟောရ-Em-Heb ခဲ့သည် ထူးထူးအပြားပြား အခွန်။
- အာရုန်သည် ရွှေနွားသငယ်ကို (တည်ဆောက်ခဲ့သောဘုရားသခင့ Taurus), သင်္ကေတ နောက်ကျောကိုကိုးကွယ်သောမှ.
- ဟောရ-Em-Heb ကိုးကွယ်ခြင်းဘုရားကျောင်းတည်ဆောက်ပွနျလညျထူထောငျခဲ့ ဘုရားသခင့ Taurusအာမုန် (ပြန်လာ ကိုးကွယ်သော).
- တဖန်မောရှေအား (မောရှေသည်) တစ်ဦးအဖြစ် (ကသားသည်ဖါရောဘုရင်အားဖြင့်ပညာတတ်ခဲ့ အမှေခံ).
- Ra-က MS ES (Ra-မောရှေသည်) ခဲ့ အမှေခံ ဖါရောမင်းသည်ဟောရ-Em-တယျ။
- ယောရှု (ယောသပ်သည်/Jo-ရှေသ) ကခဲ့ မောရှေ၏ဆက်ခံ (မောရှေသည်) ။
- ရှေသ-Y သားများနှင့် ဆက်ခံသူ Ra-က MS ES (Ra-မောရှေသည်).
- ယောရှု (Jo-ရှေသ) နည်းလမ် "ဘုရားသခငျသညျရှေ"။
- ရှေသ-Y သည့် ( "ရှေတစ်ခုမှာ" ကိုဆိုလိုသည် ဘုရားသခငျသညျရှေ)
- ယောရှု (Jo-ရှေသ) "စစ်သည်တော်ပြောသည်ခဲ့နုန်၏သား"။
- ရှေသ-Y "အားကြားပြောလေ၏Nut သား"။
- နာမ် ယင်း (အ Kabbalistic ဂျူးဘာသာများအတွက်) ဖြစ်ပါသည် ရေဘုရားသခင်နှင့်ဖခင်နေရောင်.
- Nout အဆိုပါ (Pharaonisme များအတွက်) ဖြစ်ပါသည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကနေရောင်၏နတ်ဘုရားမမိခင်.
- ယောရှု (Jo-ရှေသ) နှင့် ခါနာန်သိမ်းပိုက် (ထိုအခါတစ်ခုမှာဘုရားသခင့ Adon ၏ရှေးခယျြပြည်သူ့အဲဒီမှာ installed)
- ရှေသ-Y သူဖါရောဘုရငျဖွစျပါသညျ ခါနာန်သိမ်းပိုက်.
- ယောရှု (Jo-ရှေသ) "ရှိသည်ယူဆနေနေရောင်ကိုရပ်တန့်"။
- ရှေသ-Y သူ၏နန်းစံရှင်းရှင်းလင်းလင်း mark ဟာဖါရောဘုရငျဖွစျပါသညျနေရောင်ကိုအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုကိုးကွယ်ရပ်တန့် (အဆိုပါ3ဖါရောဘုရငျ Akh-my-အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု [All-Ankh-အာမုန်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု-အာဣမြို့နှင့်ဟောရ-Em-ဟေဗြဲ] ဆက်ခံ, အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု Amonisme ဖို့ပြန်လာတတ်ကြောင်းအကူးအပြောင်း၏ခြေလှမ်းတိုင်း mark, အရာအပြည့်အဝရှေ-Y ကို) ဖြင့်ပြုသောအမှုမဟုတ်ပါ။
- စာရာ "ခဲ့Belle"။
- Nefer Titi "ဒီဆိုလိုတယ် Belle လာ၏။ "
- စာရာ "ကိုဆိုလိုသည်မင်းသမီး"။
- Nefer Titi ခဲ့သည် မင်းသမီး အဲဂုတ္တုပြည်၌။
- စာရာခဲ့ပါတယ် 1èreအမျိုးသမီးတစ်ဦး အာဗြဟံသည်။
- Nefer Titi ခဲ့သည် 1èreအမျိုးသမီးတစ်ဦး Akh-my-Aten ၏။
- စာရာဟာဖြစ်ဟန်ဆောင် အစ်မ အာဗြဟံသည်။
- Nefer Titi ခဲ့သည် အစ်မ Akh-my-Aten ၏ -or တစ်ဝက် soeur- ။
- စာရာ သားတို့အားပေးနိုင်တယ်လို့ အာဗြဟံသည်။
- Nefer Titi သားတို့အားပေးနိုင်တယ်လို့ Akh-my-Aten ရန်။
- စာရာ လူငယ်တစ်ဦးနှင့်လှပသောသူစိမ်းပေးခဲ့တယ် (Agar) သူမ၏ခင်ပွန်းမှဒုတိယဇနီး အာဗြဟံ, ဒါကြောင့်သူမသူ့ကိုသားကိုအပ်ပေးတော်မူ၏.
- Nefer Titi လူငယ်တစ်ဦးနှင့်လှပသောသူစိမ်းပေးခဲ့တယ် (Ki-Ya) သူမ၏ခင်ပွန်းမှဒုတိယဇနီး Akh-my-Aten, ဒါကြောင့်သူမသူ့ကိုသားကိုအပ်ပေးတော်မူ၏.
- စာရာ, သို့သော်, ထို့နောက်၏ဘုရားသခင့ပျော်ရွှင်မှုကိုခဲ့သည် တစ်စက္ကန့်သားကိုပေးပါ အာဗြဟံသည် (ဣဇာက်သည်).
- Nefer Titi သို့သော်ထို့နောက်ဘုရားသခငျ့ပျြောရှငျမှုရှိခဲ့ တစ်စက္ကန့်သားကိုပေးပါ Akh-my-Aten (အားလုံး-Ankh-အာမုန် Akh-my-အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၏သားမှ: Akh ၏သား: -Akh Is ( "သား" ကိုဆိုလိုသည် "Is") ။
- အ ဒုတိယဇနီး အာဗြဟံသည်, အ ငယ်ရွယ်ပြီးလှပလူစိမ်း agar တစ်ဦး 1er သားကို ပေး. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဣရှမေလ (Smain) အာဗွဟံရန်။
- အ ဒုတိယဇနီး Akh-my-Aten, အများ၏ ငယ်ရွယ်ပြီးလှပလူစိမ်း Ki-Ya, မိန်းမ အတိအကျ သားကို 1er Smen-KH-Ka-Ra အမည်ရှိ (smen) Akh-my-Aten ရန်။
- အ ပညတ္တိကျမ်းမောရှေ၏ဇယား ခမည်းတော်ဘုရားကြလော့ကနေမောရှေသည်အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ပစ္စည်း (ကြောကျခဲ) ၏ရန် ဥပဒေအီဂျစ် stelae.
- "အာမင်"နည်းလမ်" ဒါကြောင့်ဖြစ် ":"ဘုရားသခင်ဖြစ်"။
- "မုန်"၏နာမကိုအမှီ Is Dieu ရှေးခေတ်အီဂျစ်၌တည်၏။
- အစ္စရေး decomposes -Ra-El Is.
- -Ra-El Is သားတော်သည် (ဆိုလိုတယ်Is) ကနေ (Ra) ဘုရားသခ (El).
- ဣသရလေ : ဘုရားသခငျ၏ရှေးခယျြပြည်သူ့.
- -Ra-El Is : ဘုရားသခငျ၏ပြည်သူ့သားတော်ကို.
- အ ဟေဗြဲ ခဲ့ကြ အချင်းသိုးထိန်း.
- Hyksos "ဓမ္မရာဇဝင်ကိုဆိုလိုသည် သိုးထိန်းတို့သည် " အာရဗီ။
- အ ဟေဗြဲ "သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုခေါ်သုံးရာဇဝင်"။
- အ Hyksos အဖြစ်အဲဂုတ္တုလူတို့သည်မြင်ခဲ့သည် သုံးရာဇဝင်.
- ယာကုပ်အမျိုးကို ၏ဘိုးဘေးဖြစ်ပါသည် ဟေဗြဲအဲဂုတ်တုပွညျသို့ ဝင်..
- ya Kub တစ်ဓမ္မရာဇဝင်-ဘိုးဘေးဖြစ်ပါသည် Hyksos အဲဂုတ်တုပွညျသို့ ဝင်..
- အ ဟေဗြဲ sont 1770 ဘီစီအဲဂုတ်တုပွညျသို့ ဝင်..
- အ Hyksos sont 1770 ဘီစီအဲဂုတ်တုပွညျသို့ ဝင်..
- အ ဟေဗြဲ furent ရှိနေခြင်း၏ 220 နှစ်ကြာအဲဂုတ္တုပြည်၌ကျွန်ခံရ.
- အ Hyksos furent ရှိနေခြင်း၏ 220 နှစ်ကြာအဲဂုတ္တုပြည်၌ကျွန်ခံရ.
- အ ဟေဗြဲ furent 210 ကျွန်ခံနေရာနှစ်ကြာအဲဂုတ္တုပြည်၌ဖြန့်ချိ.
- အ Hyksos အဲဂုတ်တုပွညျမှပျောက်ကွယ်သွား Akh-my-Aten ၏အချိန်မှာ, 210 ပေးစေလိုပါတယ် သူတို့ဖြစ်ကြသည်ပြီးနောက် esclavage.
ဒါပေမဲ့၊ သတိရရမဲ့အချက်ကတော့ငါတို့မှာဘယ်ဘာသာပဲရှိပါစေ၊ ဘုရားသခငျသာ နှင့်ငါတို့မြေကြီးပေါ်မှာတစ်ခုတည်းတာဝန်ရှိသည်: ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုချစ် (အခြားအရာအားလုံးကခြယ်လှယ်ရုံပဲ။ )
SOURCE မှ: http://www.nouvelordremondial.cc/2014/05/06/une-bible-de-1500-ans-confirme-que-jesus-christ-na-pas-ete-crucifie-le-vatican-tremble/
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ updates များကိုစာရင်းသွင်းပါ
အောင်မြင်ရန်လမ်းကြောင်းလေးခု - ဝိန်းဒိုင်ယာ (အသံ)
Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်းမှ sur Whitney - ကျွန်ုပ်ဖြစ်ခွင့် - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၈)"Whitney, အလွန်ကြီးစွာသောအဆိုတော် ... သူမ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေး!" ဇူလိုင်လ 12, 16:07
Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်းမှ sur ဟောငျးကမ္ဘာတည်ဆောက်သူများ - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၉)"ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်မြင့်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းလော။" ဇူလိုင်လ 12, 15:55
Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်းမှ sur ဆာဟာရထဲကနေအလှအပကုသမှု"ကုလားအုတ်နို့ကိုအဓိကအားဖြင့်ဆပ်ပြာတွင်အသုံးပြုသော်လည်း၊" ဇူလိုင်လ 11, 19:55
မေ့လျော့ Password ကို?